बालबालिकाको खानामा चिनी र नुन कम गर्न किन जरुरी छ? – Health Post Nepal
बालबालिकाको खानामा चिनी र नुन कम गर्न किन जरुरी छ?
२०७८ माघ २९ गते १३:१९
काठमाडौं – यदि तपाईंलाई धेरै मात्रामा नुन वा चिनीको सेवनले वयस्क वा वृद्धवृद्धालाई मात्र हानि हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो होइन। यी दुवैको सेवन बालबालिकाका लागि पनि हानिकारक हुन्छ। यसको सेवनले मृगौला, दाँत र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। मदरहुड अस्पतालकी वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मनिषा रञ्जन बच्चा ६ महिना नपुग्दासम्म चिनी र नुन खुवाउन नहुने बताउँछिन्। प्रायः आमाबाबु चिन्तित हुन्छन् कि बच्चालाई नुन नदिइए उसले सोडियम कसरी पाउने? जहाँ उनीहरुको आवश्यकता आमाको दूधले मात्रै पूरा भइरहेको कुरा उनीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ।
६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिनमा एक ग्रामभन्दा बढी नुन खुवाउनु हुँदैन। एकदेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिनमा दुई ग्राम नुन खुवाउनुपर्छ। ४ देखि ६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिनमा ३ ग्राम नुन खुवाउनुपर्छ। जसमा ०.४ ग्राम सोडियम होस्।
साना बच्चाहरूलाई चिनी पनि दिनु हुँदैन। बालबालिकाका लागि प्राकृतिक चिजबाट प्राप्त चिनी नै पर्याप्त हुन्छ। उनीहरूले फलफूल र अन्य खानेकुराबाट प्राकृतिक चिनी पाउँछन्, त्यो मात्रै पनि उनीहरूका लागि पर्याप्त हुन्छ। यहाँसम्म की उनीहरुलाई मह वा छोहराको सिरप पनि ८ महिनासम्म दिनु हुँदैन।
ब्रिटल बोनको खतरा – धेरै नुन खुवाउनु बालबालिकाको हड्डीका लागि पनि हानिकारक हुन्छ। यसले शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुन सक्छ। शरीरमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम भएन भने हड्डी कमजोर हुन थाल्छ। यसले हड्डी भाँचिन पनि सक्छ, जुन बढ्दो उमेरका बच्चाहरूको लागि राम्रो होइन।
डिहाइड्रेसनको खतरा – सोडियमको मात्रा बढी हुँदा बालबालिकाहरू डिहाइड्रेसनको शिकार हुन सक्छन्। जसमा शरीरको पानी पसिना वा पिसाबको रुपमा बाहिर निस्कन्छ। साना केटाकेटीहरूले आफूलाई तिर्खा लागेको कुरा आफैंले भन्न सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरूको शरीरमा पानीको कमी हुन सक्छ। यसका लक्षणहरूमा मृगौलाको पत्थरी, शरीर दुख्ने, कब्जियत र कलेजोमा क्षति पुग्छ।
हाई ब्लड प्रेशर को समस्या – खानामा धेरै नुनको कारण रगतमा बीपी लेभल बढ्छ र यसले कम उमेरमा उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउन सक्छ। यो समस्या मुटुका लागि निकै हानिकारक हुन्छ र यसले बच्चामा मुटु रोगको जोखिम बढाउन सक्छ।
किड्नीमा पथ्थरीको समस्या – शरीरमा सोडियमको मात्रा बढी हुँदा पिसाबबाट क्याल्सियम बढीमात्रामा निस्कन्छ। यो क्याल्सियमले मृगौलामा पत्थरी निम्त्याउन सक्छ। मृगौलाको पत्थरीले बच्चामा शरीर दुख्ने, चिसो लाग्ने, ज्वरो आउने र वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। पिसाबमा रगत पनि आउन सक्छ।
मृगौलालाई असर गर्छ – यदि बालबालिकालाई धेरै मात्रामा नुन खुवाइन्छ भने, उनीहरुको मृगौलाले यो अतिरिक्त सोडियमलाई प्रशोधन गर्न सक्दैन र यसलाई शरीरबाट फिल्टर गर्न सक्दैन। यसले बालबालिकाको मिर्गौलामा धेरै असर गर्छ र उनीहरुमा सानै उमेरमा मृगौला रोग देखिन थाल्छ।
तसर्थ बालबालिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी नुन वा चिनी खान दिनुभयो भने उनीहरूले थुप्रै शारीरिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जस्तो कि बच्चाहरूले आमाको दूध चाँडै छोड्छन् र तिनीहरूमा तरकारी वा अन्य खानाको स्वाद थाहा पाउने कुराको पनि विकास हुन पाउँदैन। यस्तै धेरै गुलीयव वा नुनिलो खानेकुराले बच्चामा मोटोपना, दाँत हानि हुने र मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन रोगहरू पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ।